चौरी पालनमा पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण शून्य – www.Pradesh1TV.com
चौरी पालनमा पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण शून्य
एउटा चौरी गोठबाट वार्षिकरुपमा कति आम्दानी होला ? अधिकांशको जवाफ हुन्छ, गोठबाट पनि के फाइदा होला र ? चौरी गोठसम्बन्धी अलि ज्ञान भएकाहरु भन्लान्, यस्तै ५० हजारदेखि एक लाखसम्म। तर, चौरीपालक किसान भने आश्चर्य लाग्दो जवाफ दिन्छन्।वार्षिक रुपमा ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म बचत हुने उनीहरु दावी गर्छन्।
पाँचथरको उच्च पहाडमा चौरी पालन व्यवसाय गर्ने किसानको आम्दानी निकै लोभलाग्दो छ । तर, राम्रो आम्दानी भएर पनि चौरी पालनमा पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण शून्यजस्तै भएको छ । युवा पुस्ता चौरी पालनप्रति आकर्षित नहुँदा गोठ नै लोप हुने चिन्तामा छन्, चौरी पालक।
याङवरक गाउँपालिका-१ पानीभित्ताका पेम्बा शेर्पाको गोठमा ४५ चौरी छन् । जसमध्ये १४ वटा चौरी दुहुना छन् । ‘एउटा दुहुना चौरीबाट एक सिजनमा ५० हजारसम्म आम्दानी भइरहेको छ, ‘शेर्पाले भने, ‘घिउ, छुर्पी बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी हुन्छ । चीज र चौरी बिक्री गरेर पनि आम्दानीलाई बढाउन सकिन्छ ।’
पेम्वाले वार्षिकरुपमा ८ देखि १० लाखसम्म बचत गरेको बताए । तर, आफ्नो शेषपछि चौरी गोठ सम्हाल्ने पछिल्लो पुस्ता तयार नभएकोमा भने उनीहरु चिन्तित छन्। शेर्पाका सन्तान छैनन् । उनका दाइका दुई छोरा छन् । उनीहरु कहिल्यै चौरी गोठमा देखा पर्दैनन् । भाइ र भतिजले चौरी गोठ नपाल्ने अड्डी लिएपछि बाजेको पालादेखि अंगाल्दै आएको पेशा नै मास्नुपर्ने बाध्यतामा छन् शेर्पा।
‘भाइ भतिजले कुनै हालमा चौरी गोठ नपाल्ने अठोट लिएका छन्,’ शेर्पाले भने, ‘हाम्रो पुस्ताको शेषपछि चौरी गोठ पनि लोप हुने स्थितिमा छ।’ तोरिफुलेका सूर्यमान गुरुङले गोठ सञ्चालन गरेको ४० वर्ष पुग्यो । उनको आम्दानीको स्रोत नै चौरी गोठ हो । चौरीकै आम्दानीबाट वार्षिक रुपमा ५ लाख बचत समेत गरेको उनले सुनाए । ‘चौरी पालनबाट राम्रो आम्दानी छ,’ गुरुङले भने ,’तर, छोरा नातिको आकर्षण भने पटक्‍कै छैन ।’
गुरुङका दुई छोरामध्ये माहिलो छोरा मौसमले बुवालाई गोठमा काम सघाइरहेको छन् । तर, उनले पनि गोठमा बस्ने रुचि नदेखाउँदा गुरुङ चिन्तामा छन् । ‘माहिला छोराको मन फर्कियो भने गोठले निरन्तरता पाउँला, ‘उनले भने, ‘नत्र भने गोठ मास्नुपर्ने स्थिति छ ।’
गोठमा रहेको चौरीको संख्याको आधारमा आम्दानी निर्धारण हुने गरेका छ । चौरीको घिउ, छुर्पी, चिज बिक्रीबाट राम्रो आम्दानी लिने गरेका हुन् किसानले। चौरीको पुच्छर (चँवर) र चौरी नै बिक्रीबाट पनि राम्रो आम्दानी हुने गर्छ। ‘एउटा राम्रो याक २ लाखसम्मा बिक्री हुन्छ, ‘ फालेलुङ ४ नेपालीटारका थर्कप्रसाद गुरुङले भने, ‘परिश्रमबाट नडराउने हो भने चौरी गोठबाट राम्रो कमाई हुन्छ ।’
गोठाला चौरीको घिउ प्रतिकिलो ५ सय र छुर्पी ८ सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ। चौरी गोठमा खटाई धेरै हुने भएकाले पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण नभएको गोठालाहरु बताउँछन् ।प्रविधि र परिवर्तित जीवनशैलीका कारण पछिल्लो पुस्ताले चौरी गोठप्रति आकर्षित नभएको स्थानीय बताउँछन्।